ကြည့်ရှုသူတိုင်း ရင်တွေတုန်သွားစေမယ့် Mဆိုင်းလုနဲ့ မေတို့ရဲ့ ရေကူးကန်ထက်က အမိုက်စားဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
ကြည့်ရှုသူတိုင်း ရင်တွေတုန်သွားစေမယ့် Mဆိုင်းလုနဲ့ မေတို့ရဲ့ ရေကူးကန်ထက်က အမိုက်စားဗီဒီယိုလေး
မော်ဒယ်လ် မလေး Mဆိုင်းလု က တော့ သူမရဲ့ အနု ပညာ လှုပ်ရှား မှု ပုံ ရိပ်တွေ နဲ့ အမိုက် စား အလှ ပုံလေး တွေ ကို သူရဲ့ instagram အကောင့် မှာ အများ ဆုံး ဖော် ပြ လေ့ ရှိ တာ တွေ့ရပါ တယ် ။ အခု လည်း သူငယ် ချင်း မေနဲ့ အတူ ရေကူး ဝတ်စုံ လေးနဲ့ အပြတ် ဂေါ် နေ တဲ့ ဗီဒီယို လေး ကို ဖော်ပြ ထားတာ ကြောင့် Tiktok Myanmar ချစ် ပရိသတ်ကြီး တွက် မျှဝေပေး လိုက် ပါ တယ် … .
ဆိုင်းလု က တော့ အရုပ်မလေး လို ချစ်စရာ ကောင်း တဲ့ မျက်နှာ လှလှလေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထား တာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ နိုင်ငံခြား သူလေး လို ဘိုဆန်ဆန် လှနေ တဲ့ ဆိုင်းလု က ပရိသတ် တွေ အသည်း ခိုက်အောင် ကြွေနေ ရတဲ့ မိန်းမလှ လေး ဆိုရင် လည်း မမှားပါ ဘူးနော် ။ ဒါ့အပြင် ဆိုင်းလု က အမြဲ လိုလို အမိုက် စား ဖက်ရှင် တွေ နဲ့ ခေတ် ဆန်ဆန်လေး လှနေ တတ် တာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် … .
ခေတ်နဲ့ အညီ လိုက်လျော ညီထွေစွာ ဝတ်စား ဆင်ယင် တတ်တဲ့ ဆိုင်းလု က လူငယ် ဆန်ဆန် ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ဖက်ရှင် လေးတွေ နဲ့ အမြဲ တမ်း အ ထာ ကျ နေတတ် သူ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမ က တော့ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် ပီပီ မိန်းကလေး တိုင်း အားကျရတဲ့ အချိုးအစား ပြေပြစ် ပြီး လှပတဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် အလှ ကို ပိုင် ဆိုင် ထား သူပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … .
ေမာ္ဒယ္လ္ မေလး Mဆိုင္းလု က ေတာ့ သူမရဲ့ အႏု ပညာ လႈပ္ရွား မႈ ပုံ ရိပ္ေတြ နဲ႔ အမိုက္ စား အလွ ပုံေလး ေတြ ကို သူရဲ့ instagram အေကာင့္ မွာ အမ်ား ဆုံး ေဖာ္ ၿပ ေလ့ ရွိ တာ ေတြ႕ရပါ တယ္ ။ အခု လည္း သူငယ္ ခ်င္း ေမနဲ႔ အတူ ေရကူး ဝတ္စုံ ေလးနဲ႔ အျပတ္ ေဂၚ ေန တဲ့ ဗီဒီယို ေလး ကို ေဖာ္ၿပ ထားတာ ေၾကာင့္ Tiktok Myanmar ခ်စ္ ပရိသတ္ႀကီး တြက္ မၽွေဝေပး လိုက္ ပါ တယ္ … .
ဆိုင္းလု က ေတာ့ အ႐ုပ္မေလး လို ခ်စ္စရာ ေကာင္း တဲ့ မ်က္ႏွာ လွလွေလး ကို ပိုင္ဆိုင္ ထား တာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ နိုင္ငံျခား သူေလး လို ဘိုဆန္ဆန္ လွေန တဲ့ ဆိုင္းလု က ပရိသတ္ ေတြ အသည္း ခိုက္ေအာင္ ေႂကြေန ရတဲ့ မိန္းမလွ ေလး ဆိုရင္ လည္း မမွားပါ ဘူးေနာ္ ။ ဒါ့အျပင္ ဆိုင္းလု က အျမဲ လိုလို အမိုက္ စား ဖက္ရွင္ ေတြ နဲ႔ ေခတ္ ဆန္ဆန္ေလး လွေန တတ္ တာ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
ေခတ္နဲ႔ အညီ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြစြာ ဝတ္စား ဆင္ယင္ တတ္တဲ့ ဆိုင္းလု က လူငယ္ ဆန္ဆန္ ေပါ့ေပါ့ ပါးပါး ဖက္ရွင္ ေလးေတြ နဲ႔ အျမဲ တမ္း အ ထာ က် ေနတတ္ သူ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သူမ က ေတာ့ ေမာ္ဒယ္လ္ တစ္ေယာက္ ပီပီ မိန္းကေလး တိုင္း အားက်ရတဲ့ အခ်ိဳးအစား ေျပျပစ္ ၿပီး လွပတဲ့ ခႏၶာ ကိုယ္ အလွ ကို ပိုင္ ဆိုင္ ထား သူပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
Previous post တစ်ကိုယ်လုံးအလှတွေကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လေး ပြသထားတဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး